Manchester City 5-0 Newcastle United: City Oo Saddex Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka Horyaalka
HomeWararka CiyaarahaManchester City 5-0 Newcastle United: City oo Saddex Dhibcood ku qabatay Hogaanka Horyaalka
May 8, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Manchester City ayaa seddex dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka horyaalka Premier League ka dib markii ay 5-0 ku xasuuqeen Newcastle oo marti ku aheyd Etihad Stadium, waxayna ka faa’ideysteen jabkii shalay Liverpool soo gaaray ee ay barbaraha kala kulmeen Tottenham.
Goolal ay kala dhaliyeen Raheem Sterling (2), Laporte, Rodri iyo Foden ayay Man City ku xaqiijisatay seddex dhibcood, iyagoo haatan seddex dhibcood ka sareeya Liverpool iyadoo xilli ciyaareedka ay ka harsan tahay kaliya seddex kulan. City ayaa sidoo kale farqiga goolasha afar gool ka sareysa Liverpool.
City ayay ku qaadatay kaliya 19 daqiiqo inay hogaanka u qabato ciyaarta markii kubad ka timid Cancelo uu madax ku dhaliyay Raheem Sterling. City ayaana sii maamuleysay ciyaarta iyagoo abuurayay fursado ay hogaanka ku sii dheereysan lahaayeen.
Daqiiqadii 38aad ayay heleen goolkii labaad ee ay raadinayeen markii darbo ka timid Gundogan uu qaban waayay goolhaye Dubravka waxaana dulyimid Dias oo damcay inuu kubada ku celiyo shabaqa, laakiin Dubravka ayaa gacanta uga taabtay ka hor inta uusan Laporte si sahlan shabaqa u dhex dhigin.
Labadaas gool ee ay hogaanka ku heysay Manchester City ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
City ayaa kubadeedii weerarka halkeeda ka sii waday qeybtii labaad ee ciyaarta, waxayna goolka seddexaad heleen daqiiqadii 61aad markii Newcastle ay difaacan weysay kubad koorno aheyd.
Kubad uu soo qaaday De Bruyne ayaa waxaa shabaqa ku aasay Rodri oo hogaanka Man City ka dhigay 3-0.
Man City ayaa isku dayday inay goolasha sii batsato si ay farqiga goolasha ugu sii dheeraadaan Liverpool, waxayna goolka afaraad heleen daqiiqadii 90aad ee ciyaarta markii Grealish uu ka soo xarooday garabka bidix isagoo kubada u celiyay Zinchecko oo u sii dhigay Foden kaasoo aan ka daahin inuu shabaqa cusjiyo.
Daqiiqadii 2aad ee labo daqiiqo oo lagu daray ciyaarta ayay Manchester City heshay goolka shanaad markii Jack Grealish uu quudiyay Sterling oo dhaliyay goolkiisii labaad.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 5-0 oo ay Man City ku xasuuqday Newcastle United.